Articles tagged 'mangongo'
Mangongo happy with new role 15 April 2015 HARARE - Former Zimbabwe cricket national team coach Stephen Mangongo is delighted with his new role within the local game. Mangongo was sacked last December after Zimbabwe's disastrous tour of Bangladesh and replaced by Dav Whatmore before he was redeployed to the post of talent identificatio...
After coaches, reinforce squad too 23 December 2014 HARARE - Laudable as it is, the pending changes in the Zimbabwe cricket team’s technical department needs to be boosted by adding impetus to team line-up, which in this case means reintegrating back players who have prematurely retired from international cricket. What the Bangladesh whitewash ...
Zim Cricket sack Mangongo 19 December 2014 HARARE - Stephen Mangongo was yesterday sacked as Zimbabwe cricket coach just two months before the World Cup gets underway in Australia and New Zealand. Mangongo's sacking comes after Zimbabwe’s worst tour in history, losing all three Tests and five ODIs in Bangladesh. The horrific tour sp...
Bangladesh debacle leaves huge scar 5 December 2014 HARARE - Worse has happened in Zimbabwean cricket, off the field. On it, we have reached new levels of mediocrity with the whitewash defeat in Bangladesh. That result will leave a deep scar on our nation’s cricket psyche, and it can be compared to all the previous misfortunes that have befall...
We've become a laughing stock 2 December 2014 HARARE - Zimbabwe cricket fans have reacted angrily to the team’s whitewash defeat on tour in Bangladesh with a wave of posts on social network sites. The tone of the comments ranges from depression and despair to rage and resentment, with coach Stephen Mangongo and the ZC executive bearing th...
C'mon, we know who the real culprits are 14 November 2014 HARARE - I have long thought of myself as immune to Zimbabwe Cricket spitefulness since one night – nine years ago – when a wonderful opportunity presented itself for ZC to hit back at this problematic journo, they probably thought, in the hardest way to do so. I'd penned a series of hard-hitt...
Masakadza denies discontent claims 29 August 2014 HARARE - Zimbabwe senior batsman Hamilton Masakadza has hosed down suggestions of player discontent following continued speculation about drama in the camp. Unorthodox coaching style, strict managerial methods and inconsistency is team selection has led to rumours of low morale in the team. ...
Sibanda gets fresh start 6 August 2014 HARARE - Zimbabwe top order batsman Vusi Sibanda is poised to return to his opening spot in the on-off Test against South Africa that starts this Saturday at Harare Sports club. Sibanda was dropped by the selectors after scoring just four runs in the opening match of the drawn One Day Internat...
'Bring on the Proteas!' 5 August 2014 HARARE - The long wait is almost over for new Zimbabwe cricket coach Steve Mangongo. Zimbabwe host giants South Africa in a one-off Test match at Harare Sports Club beginning on August 9 with the world's attention firmly fixed on the tie and keen to see how lightweight Zimbabweans will perform...
ZC restructuring puts game on ice 10 May 2014 HARARE - Embattled Zimbabwe Cricket (ZC) on-going restructuring exercise has put the game virtually on hold across the country. With the domestic season over, players out of contract and awaiting winter- deals it has become impossible for the coaches to tie down the local cricketers to any for...
Wunderkid Welch sets Logan Cup alight 9 April 2014 HARARE - Sixteen-year-old Mashonaland Eagles opening batsman Nick Welch has wasted absolutely no time in piling up the runs in only his second first-class match, drawing high praise from his coach Stephen Mangongo. The St John's College form four pupil, a member of the Zimbabwe Under-17 team, ...
Mangongo calls for return to basics 25 March 2014 HARARE - Cricket development stalwart Stephen Mangongo says Zimbabwe must return to the old way of doing things following the national side’s disappointing exit from the ICC World Twenty20 at the first hurdle. The Zimbabweans, who endured disruptive effects of a payment dispute before the tour...
Zim to assess everyone ahead of World T20 11 March 2014 HARARE - Zimbabwe's leading Twenty20 performers, Hamilton Masakadza and Prosper Utseya, will be rested for today's practice match against Bangladesh Select in Chittagong as the African side look to assess other squad players ahead of the upcoming ICC World Twenty20. Top order batsman Masakadza...
Mangongo defends Kamungozi selection 1 March 2014 HARARE - Assistant coach Steve Mangongo has defended the inclusion of Tafadzwa Kamungozi in Zimbabwe’s ICC World Twenty20 squad seven years after the leg-spinner last played international cricket. The Southern Rocks leg-spinner was the major surprise in the 15-man travelling party, which is in...
Mangongo commits to Mash Eagles 24 September 2013 HARARE - Zimbabwe cricket assistant Stephen Mangongo will have another dance as the head coach of Mashonaland Eagles for the upcoming 2013-14 domestic league. The Zimbabwean cricket development stalwart was on a one-year contract with the Harare franchise side last season following the tragic ...
Mangongo in emotional T20 final 10 February 2013 HARARE - Mashonaland Eagles coach Stephen Mangongo is relishing a dog fight in an emotionally charged domestic franchise Twenty20 final against his former side Mountaineers at Harare Sports Club Sunday. Mangongo, who is also the national team assistant coach, won the inaugural Stanbic T20 competi...
Mangongo to wield axe on non-performers 24 November 2012 HARARE - Mashonaland Eagles coach Stephen Mangongo is set to wield the axe on under-performing batsmen following three successive defeats in the Castle Logan Cup. The latest in the series of losses came yesterday when the Eagles succumbed to defending champions Matabeleland Tuskers by 312 runs at...